Ciyaartoyda Soomaaliya Oo Guulo Dahab ah kasoo Hooyay Tartanka Ciyaaraha Fudud Ee ka Dhacay Jabuuti.(Sawiro)	| Awdalmedia.com
Ciyaartoyda Soomaaliya Oo Guulo Dahab ah kasoo Hooyay Tartanka Ciyaaraha Fudud Ee ka Dhacay Jabuuti.(Sawiro)
Sat 16 March 2019.
Ciyaaryahannada xulka qaranka cayaaraha fudud ayaa guul taariikhi ah usoo hoyiyay Soomaaliya,iyagoo ku guuleystay biladdo dahah ah tartanka cayaaraha fudud ee ka socda dalka Jabuuti.
Tartanka cayaaraha fudud ee Djibouti International Meeting , waxaa Soomaaliya uga qaybgalay 5 cayaaryahan oo laba qayb ku kala tartamayay waxaana wafdiga cayaartoyda qaranka hoggaaminayay guddoomiyaha guddiga Olombikada qaranka Soomaaliyeed,Cabdullaahi Axmed Tarabi oo ay wehliyaan guddoomiyaha Xiriirka cayaaraha Fudud, Khadiijo Aadan Daahir iyo Guddoomiye ku-xigeenka Xiriirka cayaaraha Fudud Faarax Cali Macallin.
1- Cabdi Salaan Axmed Maxamed oo ku tartamay orodka 800mtr ayaa kaalinta koowaad ka galay kaddib markii uu ku oraday 1:55 Ilbiriqsi waxaaa lagu abaalmariyay Biladda dahabka.
2- Cabdullaahi Jaamac Maxamed oo orodka1500 mtr ee dhanka da’yarta u tartamayay ayaa kaalinta koowaad isna ku dhamaystay kaddib markii ku orday 3:46 :78 waxuuna sidaaasi ku hantay Biladda dahabka.
3- Cabdicasiis Cabdullaahi Maxamed Orodka da’yarta 3,000mtr ka qayb galay ayaa bandhigiisa aad u wanaagsanaa waxuu soo galay kaalinta afaraad kaddib markii uu ku orday 8:36. isgaoo ku dhawaad inuu biladda maarta hanto.
4- Cabdirashiid Yuusuf oo dhanka da'yarta orodka 800 ku tartamayay ayaa isna kasoo galay kaalinta 6-aad ee tartanka.
5- Cali Iidow Xasan oo qaybta ciyaartoyda waa weynka ku jiray ayaa kua dhamaystay kaalinta 7-aad ee tartanka qaybtiisa 1500mtr waxuuna ku orday 3:49 taasoo ahayd daacad wanaagsan.
Dhammaan cayaartoyda ayaa marka laga soo tago guulaha iyo kaalmaha ay galeen waxay sameeyeen saacado wanaagsan.Cayaartoyda Xulka qaranka cayaaraha Fudud ee guulaha keenay ayaa xero tabbabar oo gudaha dalka waxaa sannadkii 2017kii ugu diyaariyay Guddiga olombikada qaranka Soomaaliyeed halkaas oo ay tabbabar ku qaadanayeen muddo sannad ah , waxaana kaddib loo wareejiyay dalalka Kenya iyo Itoobiya si ay tababarro heerkoodu sarreeyo u helaan taasoo sahashay guushan taariikhi ah. C